Akụkọ - Akụrụngwa nkwakọ ngwaahịa ụkpụrụ nhọrọ na ngwa nkwakọ ngwaahịa
Nhọrọ nhọrọ nkwakọ ngwaahịa omenala na akụrụngwa nkwakọ ngwaahịa
Ihe nkwakọ ngwaahịa na-ezo aka na ihe eji eme ka ihe nkwakọ ngwaahịa dị iche iche wee mezuo ihe achọrọ nke nkwakọ ngwaahịa, nke bụ ihe ndabere nke ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa. Ọ bụ otu n'ime ọnọdụ dị mkpa maka imepụta ihe nkwakọ ngwaahịa iji ghọta ma mara ụdị, akụrụngwa na ojiji nke ihe nkwakọ ngwaahịa na ịhọrọ ihe nkwakọ ngwaahịa n'ụzọ ezi uche dị na ya.
Principleskpụrụ nhọrọ nke ihe nkwakọ ngwaahịa
Nhọrọ nke ihe dị ezigbo mkpa na nhazi nkwakọ ngwaahịa. Ọ bụrụ na ihe ahụ ezighi ezi, ọ ga-eweta mfu na-enweghị isi na ụlọ ọrụ ahụ. Nhọrọ nke ihe nkwakọ ngwaahịa kwesịrị ikpebi dịka njirimara nke ngwaahịa ahụ n'onwe ha, yana ụkpụrụ bụ isi nke nchekwa sayensị, akụ na ụba na gburugburu ebe obibi.
1. Dabere na ngwaahịa ina
Nhọrọ nke ihe abụghị aka ike. Nke mbụ, a ga-ahọrọ ihe ahụ dabere na njirimara nke ngwaahịa, dị ka ụdị ngwaahịa (siri ike, mmiri mmiri, wdg), ma ọ na-emebi ma na-agbanwe agbanwe, yana ọ dị mkpa ka echekwa ya pụọ ​​n'ìhè . Nke abuo, anyi kwesiri itule ogo nke ngwongwo. Ihe nkwakọ ngwaahịa nke ngwaahịa ma ọ bụ ngwa ziri ezi kwesịrị ị instrumentsa ntị na ọdịdị ọdịdị ha na arụmọrụ dị mma; Ihe nkwakọ ngwaahịa nke ngwaahịa ndị dị n'etiti kwesịrị ị paya ntị na aesthetics na ihe bara uru; ebe ihe nkwakọ ngwaahịa nke ngwaahịa dị ala kwesịrị ibute ụzọ dị mkpa.
2.Nchekwa nke ngwongwo
Ihe nkwakọ ngwaahịa kwesịrị ichekwa ngwaahịa ahụ n'ụzọ dị irè, n'ihi ya, o kwesịrị inwe ụfọdụ ike, ike na ekwedo, iji gbanwee mmetụta nke nrụgide, mmetụta, ịma jijiji na ihe ndị ọzọ dị na mpụga.
3.E aje na gburugburu ebe obibi-enyi na enyi
Ekwesịrị ịhọrọ ihe nkwakọ ngwaahịa dị ka o kwere mee site n'ọtụtụ ebe dị iche iche, adaba, ọnụ ala, ihe eji emegharị emegharị, ihe na-emebi emebi, na-ewepụta ihe ndị na-enweghị mmetọ, ka ọ ghara ibute ihe egwu ọhaneze.
Ngwa nkwakọ ngwaahịa na njirimara arụmọrụ ha
E nwere ọtụtụ ihe nkwakọ ngwaahịa. Ndị a na-ejikarị eme ihe ugbu a bụ akwụkwọ, plastik, ọla, iko, seramiiki, ihe ndị sitere n'okike, ihe eji emepụta eriri, ihe ndị mejupụtara na ihe eji emebi gburugburu ebe obibi.
1.Porter nkwakọ ngwaahịa
N'ime usoro nkwakọ ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa, ihe nkwakọ ngwaahịa akwụkwọ, dị ka ihe nkwakọ ngwaahịa a na-ejikarị eme ihe, n'ọtụtụ ebe na mmepụta na ibi ndụ, site na ngwaahịa ụlọ ọrụ, nkwakọ eletriki, akpa aka, igbe onyinye, site na akwụkwọ nkwakọ ngwaahịa izugbe na akwụkwọ nkwakọ ngwaahịa. , niile na-egosi amara nke akwụkwọ nkwakọ ngwaahịa.
Akwụkwọ ihe nhazi bụ adaba, ala na-eri, adabara maka uka n'ibu mmepụta na ezi-ebi akwụkwọ, na nwere uru nke imegharị ihe maka iji, akụ na ụba na gburugburu ebe obibi-echebe.
2.plastic ihe nkwakọ
Plastic bụ ụdị keakamere sịntetik sịntetik polima ihe. Ọ dị mfe ịmepụta, ma nwee ezigbo njirimara nke iguzogide mmiri, mgbochi mmiri, iguzogide mmanụ na mkpuchi. Na ukwuu ngwaọrụ, ala na-eri na ndị magburu onwe arụmọrụ, ọ na-aghọ ndị kasị na-emepe emepe nkwakọ ihe onwunwe na ụwa na n'oge gara aga 40 afọ na bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa nkwakọ ihe na oge a na ahịa nkwakọ.
3.Metal nkwakọ Akụrụngwa
Dị ka otu n'ime ọdịnala nkwakọ ngwaahịa, a na-eji ọla na-arụ ọrụ na nkwakọ ngwaahịa ngwaahịa, njem njem na nkwakọ ngwaahịa, ma na-ekere òkè dị mkpa na ihe nkwakọ ngwaahịa.
4.Glass, seramiiki nkwakọ ihe
Ihe ndị bụ isi nke iko bụ quartz sand, caustic soda na limestone. O nwere njirimara nke nghọta dị elu, enweghị ike na mmebi mmebi ahụ, nke na-adịghị egbu egbu na nke na-enweghị isi, arụmọrụ kemịkalụ siri ike yana ọnụ ahịa mmepụta dị ala ma nwee ike bụrụ nke nwere nghọta na translucent nke ụdị na agba dị iche iche.
A na-ejikarị iko eme ihe na nkwakọ mmanụ, mmanya, nri, ihe ọverageụ ,ụ, jam, ihe ịchọ mma, ihe eji esi nri na ngwaahịa ọgwụ.
Efere nwere ezigbo kemịkalụ kemịkalụ na nkwụsi ike nke ikuku, ma nwee ike iguzogide ogo dị elu na nsị nke ọgwụ kemịkal dị iche iche. Mgbanwe ọsọ ọsọ na okpomọkụ na oyi adịghị enwe ihe ọ bụla na seramiiki, enweghị nrụrụ na njọ maka afọ. Ọ bụ ezigbo ihe nkwakọ ngwaahịa maka nri na kemịkal. Ọtụtụ nkwakọ ngwaahịa seramiiki n'onwe ya bụ ezigbo aka, ma nwee uru ọpụrụiche pụrụ iche n'ọhịa nke nkwakọ ngwaahịa ọdịnala.
5.Natural nkwakọ ihe onwunwe
Ngwunye ihe eji eme ihe na-ezo aka na anụ anụmanụ, ntutu ma ọ bụ ahịhịa osisi, osisi, mkpanaka, eriri, wdg, nke enwere ike iji dị ka ihe nkwakọ ngwaahịa ozugbo ma ọ bụ naanị ịhazi ya n'ime efere ma ọ bụ akwa.
6.Fiber akwa nkwakọ ihe onwunwe
Fiber akwa bụ nke dị nro, mfe ibipụta na dai, na ike ga-reused na recycled. Mana ụgwọ ya dị elu, nkwụsi ike dị ala, na-adịkarị mkpa maka nkwakọ ngwaahịa nke ngwaahịa ahụ, dịka njuju, ịchọ mma, ihe mkpuchi na ọrụ ndị ọzọ. Eriri akwa nkwakọ ihe na ahịa nwere ike tumadi kewara eke eriri, mmadụ mere eriri na sịntetik eriri.
Ejiri ihe abuo ma obu karie abuo mejuputara site na uzo di iche iche na uzo oru nke mere na o nwere njirimara nke ihe di iche iche iji mejuputa mmejọ nke otu ihe, na-eme ihe nkwakọba ihe zuru oke nke zuru oke. E jiri ya tụnyere ihe ọdịnala, ihe ndị mejupụtara nwere uru nke ịchekwa ihe onwunwe, ịmegharị dị mfe, na-ebelata ọnụahịa mmepụta na mbenata ibu nkwakọ ngwaahịa, yabụ na-abawanye uru ma na-akwado ya.
8.New gburugburu ebe obibi-enyi na enyi emebi ala nkwakọ ihe
Ihe ohuru ndi enyi na gburugburu ebe obibi bu ihe ndi mejuputara iji belata mmetuta ocha, nke a na-eme site na ichikota osisi ma obu osisi ndi ozo. Ọ bụ ihe na-emebi emebi na ọ dịghị mfe ime mmetọ, ọ bụkwa isi mmepe mmepe nke ihe nkwakọ ngwaahịa n'ọdịnihu.